Madheshvani : The voice of Madhesh - एकीकरणको कुरामा हल्ला बढी : अशोक राई
एकीकरणको कुरामा हल्ला बढी : अशोक राई
वरिष्ठ नेता, समाजवादी पार्टी
२०७६ साल फागुन ३० गते शुक्रबार
० समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिएपछि अहिले के गर्दैछ ?
— अहिले हामी पार्टी संगठनको विस्तार र सुदृढीकरणको अभियानमा व्यस्त छौं । नयाँ शक्ति पार्टीसँग एकतापश्चात् जिल्ला र स्थानीय तहसम्मको समायोजन अझै बाँकी रहेकोले त्यसलाई पूर्णता दिनका लागि सो कार्यलाई तीव्रतापूर्वक लागेका छौं । साथै दुवै पार्टीका सदस्यता रेकर्ड गर्ने, नयाँ सदस्यता निर्माण गर्ने, नयाँ सदस्यहरूलाई प्रवेश गराउने र पार्टी एकता हुनसक्ने समूह वा पार्टीसँग वार्ता अगाडि बढाउने लगायतक कामहरूम हामी लागेका छौं । प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई व्यापकरूपले सञ्चालन गरिरहेका छौं । पार्टीभित्रका समस्याहरू समाधान गर्ने, पार्टीलाई भावनात्मकरूपमा एकीकृत बनाउने, वैचारिकरूपमा उन्नत बनाउने र आन्दोलनको तयारी गर्ने काममा हामी व्यापकरूपमा लागिपरेका छौं ।
० जुन उद्देश्यका साथ समाजवादी सरकारमा गएको थियो त्यो पूरा भएन र बाध्य भएर सरकारबाट बाहिरिनुप¥यो । भनेपछि तत्कालीन अवस्थामा सरकारमा जाने निर्णय समाजवादीको ठूलो गलती थियो भन्ने अनुभूति भएको छ?
— तत्कालीन अवस्थामा हामी सरकारमा जाने गरेको निर्णय गलत थिएन, त्यो उपयुक्त निर्णय थियो । नेकपासँग सुविधाजनक बहुमत थियो, हामी सामेल हुँदा दुई तिहाइ पुग्थ्यो । त्यस्तो सरकारमा आउनका लागि प्रधानमन्त्रीले बारम्बार अनुरोध गर्नुभएको थियो । आन्दोलनको क्रममा हामीले उठाएका मुद्दाहरूलाई संविधान संशोधन गरेर सम्बोधन गर्ने भनेर लिखित सम्झौता नै गरेको स्थितिमा हामी सरकारमा नगएको भए प्रधानमन्त्रीले हामीले संविधान संशोधन गर्ने भनेकै थियौं तर उहाँहरू सरकारमा आउनु भएन भनेर हामीमाथि दोष लगाउनु हुन्थ्यो । त्यसकारणले हामीले भन्यौं कि सरकारमा गएर हेरौं न त । हामी जाँदा दुई तिहाइ पनि पुग्छ, जनताले विश्वास गरेको सरकारले संशोधन गर्छु भनिरहेको अवस्थामा हामी सरकारमा गयौं । तर, अन्ततः प्रधानमन्त्रीको बेइमानीपूर्ण हर्कत उदाङ्गो भएपछि हामी सरकारबाट बाहिरियौं । किनकि नेपाली जनताले बुझ्न जरूरी थियो कि वास्तवमा प्रधानमन्त्रीले आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, शिल्पी, महिला, मुस्लिम लगायतका समस्याहरू समाधान गर्न चाहनुहुन्न । यो संविधानमा रहेका विकृत्ति, विभेदयुक्त व्यवस्थाहरू, साम्प्रदायिक र जातिवादी व्यवस्थाहरूलाई सुधार गर्न चाहनुहुन्न भन्ने कुराहरू साँचो अर्थमा जनतालाई बुझाउनुपर्ने आवश्यक थियो । त्यो काम सम्पन्न भएको छ ।
० समाजवादी पार्टी करिब डेढ वर्षसम्म सरकारमा बस्दासम्म कहिल्यै पनि इमान्दार प्रयास नगरेको आरोप छ नि ?
— हामी सरकारमा बस्दासम्म प्रधानमन्त्रीलाई बारम्बार आग्रह ग¥यौं कि संविधान संशोधनको प्रक्रिया सुरू गर्नुस्, हामीले संसदमा पनि बारम्बार आवाज उठायौं, प्रधानमन्त्रीसँग वार्ता गरियो, डेलिगेशन दियौं । जब हाम्रा पार्टी अध्यक्ष कानूनमन्त्री हुनुभयो तब उहाँले संविधान संशोधन गर्न एउटा कार्यदल बनाउन प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री हाम्रो प्रस्तावलाई ठाडै अस्वीकार गरिदिनुभयो । यसबाट प्रष्ट भयौं कि प्रधानमन्त्रीले संविधानमा रहेका विभेद र असमानताहरू हटाउन चाहनु हुन्न । त्यसपछि हामी सरकारबाट फिर्ता भएका हौं ।
० समाजवादी र राजपाबीच एकताका लागि बाधा अवरोधहरू के–के छन् ?
— दुई पार्टीबीच एकता गर्ने कुरा निकै नै जटिल काम हो । असम्भव होइन तर जटिलतायुक्त काम अवश्य हो । राजपा र समाजवादीबीच एकता गर्ने विषयमा शीर्षस्थ नेताहरूबीच विचार आदान–प्रदान गर्ने कुराहरू भइरहेका छन् । ६ जना अध्यक्ष भएको पार्टी राजपा रहेकोले सबैसँग छलफल गरेर सहमति बनाउनुपर्ने अवस्था छ । हाम्रो पार्टीमा पनि नेताहरूबीच सहमति सझदारी बनाउने जिम्मेवारी छ । वैचारिक र सैद्धान्तिक विषयमा छलफल गर्नुपर्ने पहिलो प्राथमिकता हो । वैचारिक र सैद्धान्तिक विषयमा हामीले छलफल थालेकै छैनौं । हाम्रो मुद्दा मिल्छन् भन्ने कुरा त छ हाम्रो । नेताहरूको व्यवस्थापन कसरी हुने भन्ने सवाल निकै संवेदनशील र महत्वपूर्ण हो । तर, मुख्य कुराहरूमा नीति, सिद्धान्त, विचार र विधि–विधानको विषयमा अहिलेसम्म पनि हाम्रो छलफल नै सुरू भएको छैन । हामी एकै ठाउँमा हुनसक्छौं भन्ने छ तर मुख्य कुराहरूमा अहिले पनि छलफल नै प्रारम्भ भएको छैन । हामी के मिशन र उद्देश्यका निम्ति एक हुँदैछौं भन्ने प्रष्ट हुनुपर्छ ।
० भनेपछि राजपा र समाजवादीका नेताहरूले एकताका सैद्धान्तिक र वैचारिक बहस नै सुरू गरेका छैनन्, बाहिर हल्ला मात्रै गर्दैछन् ?
— अहिले नेताहरूको व्यवस्थापनको विषयमा मात्रै बढी ध्यानाकर्षण भएको देखिन्छ । तर विचार, नीति, विधि, सिद्धान्तहरूको सवालमा प्रवेश नगरिकन एकताका बारे बाहिर–बाहिर हल्ला मात्रै भइरहेका छन् । दुवै दलका नेताहरूले एकताबद्ध हुनुपर्छ, एकता नभइकन वैकल्पिक शक्ति बन्दैन, त्यो नभइकन विभेदका कुराहरू हटाउन सक्दैन भन्ने कुरामा प्रष्ट छन् । त्यहीअनुसार हामी अनौपचारिक विचार आदान–प्रदानमा लागेका छौं ।
० पार्टीभित्र नेताहरूको व्यवस्थापन नमिलेर नै अहिलेसम्म मुख्य विषयमा प्रवेश हुनै नसक्नुभएको हो कि ?
— हाम्रो धेरै सैद्धान्तिक विषयहरू मिल्छन् त्यसलाई लिपिबद्ध गर्नुपर्छ । विचार र सिद्धान्तको कुरा शब्द शब्दमा, वाक्य वाक्यमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले अलि जटिल विषय हो । हामीले सोचेको जस्तो सहज विषय होइन । नेतृत्वको व्यवस्थापनको पक्ष अलि बढी संवेदनशील विषय हो । यो दुवै कामहरूमा हामी ठोस निष्कर्षमा पुगेका छैनौं ।
० राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा राजपाले नेकपासँग एकता गर्दा एकता प्रक्रियालाई असर गरेको छ ?
— खासै प्रभाव पारेको छैन । चुनावमा राम्रो नतिजा प्राप्त गर्नका निमित्त जुनसुकै दलसँग सहकार्य हुन सक्छ । राजपा र समाजवादी एकीकरण भइसकेपछि त अहिले राजपाले राष्ट्रियसभामा जितेको दुई सिट पनि त हाम्रै हुन्छ नि ।
० राष्ट्रियसभा चुनावमा राजपा र नेकपासँगको सहकार्यसँगै प्रदेश २ को सरकार परिवर्तनका विषयहरू पनि चर्चामा आए, प्रदेश २ मा तपाईहरूको सहकार्य ५ वर्ष टिक्न नसक्ने हो त ?
— हामीले राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा पनि सहकार्य गर्न सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो त्यतिबेला सहकार्य हुन सकेन । प्रदेश २ को सरकार परिवर्तनको विषयमा बाहिरी रूपमा जसरी हल्ला चलेको छ त्यसमा सत्यता छैन । बरू राजपा संघीय सरकारमा सहभागी हुने विषय पनि अगाडि आएको छ । एउटा सार्वभौम पार्टीले के गर्ने भनेर निर्णय गर्न सक्छ तर मुलुकको राजनीतिको विश्लेषण गर्दा हामीले पनि संघीय सरकारमा लामै समय बसेर अनुभव बटुलेर आएको हुनाले संविधान संशोधनलाई मुद्दा बनाएर अहिलेको सरकारमा सहभागी हुनु त्यति उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्दैन । हिजो हेरौं न त भन्ने स्थिति थियो अब त्यस्तो अवस्था छैन ।
० राजपा यथास्थितिमा संघीय सरकारमा सहभागी नहोस् भन्ने तपाईहरूको सुझाव हो ?
— हामीले त्यसरी भन्न मिल्दैन । वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा संविधान संशोधनलाई मुद्दा बनाएर अगाडि बढिराखेका दलहरूले कसरी अगाडि बढ्दा ठिक होला भन्ने विषयमा मेरो आफ्नो धारणा मात्र राखेको हुँ । राजपा नेपालका शीर्ष नेताहरूले पनि अब संविधान संशोधन नभइकन संघीय सरकारसँग सहकार्य गर्नु उपयुक्त हुँदैन भनेर अभिव्यक्ति दिइरहनुभएको छ । त्यसैले हामीले केही भनिरहन आवश्यक नै पर्दैन भन्ने लाग्छ मलाई ।
० तपाईहरू अहिले प्रतिपक्षको भूमिकामा हुनुहुन्छ । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसको भूमिका खासै सशक्त देखिएन भन्ने गरिन्छ । सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न कांग्रेससँग सहकार्य गर्ने कुनै योजना छ ?
— कांग्रेससँग हाम्रो मुद्दागत हिसाबले सहकार्य हुन्छ, कांग्रेसको भूमिका कस्तो छ भन्ने विषयमा सबैजना जानकार नै छन् । एकदमै शालीन र सभ्य भूमिकामा काँग्रेस छ । सरकारलाई काम गर्ने अवसर नै दिएर प्रतिपक्षले हरेक कुरामा खुट्टा तान्यो भन्ने हिसाबले आरोपहरू लाग्ने गरेको छ, त्यो आरोपबाट बच्न कांग्रेसले सरकारलाई काम गर्ने अवसर दिएको पनि हुनसक्छ । त्यति संवेदनशील प्रतिपक्ष र आन्दोलनकारी शक्तिहरूमध्येको एउटा शक्ति सरकारमै सामेल भएर दुई तिहाईको सुविधा दिएको स्थितिमा पनि सरकारले खासै उपलब्धि हासिल गर्न नसक्नुले सरकार असक्षम देखियो । यो सरकार गफाडीहरू र भ्रष्टहरूको जमातको रूपमा जनता माझ देखा परेको छ । हामी अहिले संगठनको काममा लागेका छौं । एक तहमा यो काम सम्पन्न गरिसकेपछि हामी आदोलनको काममा अगाडि बढ्छौं । त्यसरी अगाडि बढ्दा हामीसँग मुद्दा मिल्ने र हामीसँगै संघर्ष गर्न तयार हुने शक्तिहरूसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्छौं ।
० अब हुने संघर्ष कस्तो हुन्छ ?
— अब हुने आन्दोलन शान्तिपूर्ण रूपमा सडक र सदनमा हुन्छ । हाम्रा मुद्दाहरूलाई जनता समक्ष पु¥याउनका लागि र जनतालाई हाम्रो विचार र सिद्धान्तसँग जोड्नका लागि र जनतालाई सडकमा उतार्नका लागि हामी संघर्षमा जान्छौं ।